फ्रान्सका मिडफिल्डर एनगोलो कान्टे जो खेल मैदानमा खेलाडीले फालेका सिसि,बोत्तल र अन्य कवाडी समान उठाउने गर्थे ! – Etajakhabar
फ्रान्सका मिडफिल्डर एनगोलो कान्टे जो खेल मैदानमा खेलाडीले फालेका सिसि,बोत्तल र अन्य कवाडी समान उठाउने गर्थे !
यसपछि मैले क्लबमा फ्री रोल पाएँ । प्रशिक्षकले मलाई जहाँबाट पनि खेल्न पाउने छुट दिएका थिए । मेरै खेल हेर्नका लागि मात्रै भए पनि फ्यानहरू पार्क धाउने अवस्थासमेत आयो । यसपछि मलाई बोउलग्नेबाट प्रस्ताव आयो, सन् २०१०/१२ को सिजनका लागि । यहाँ प्रशिक्षक डुरन पनि मसँग धेरै प्रभावित भए र मेरो सपना पूरा हुने बाटोमा म धेरै नजिक थिएँ । बोउउलग्नेबाट खेल्ने क्रममा लेइस्टर सिटीका स्टिभ वेल्सले मेरो खेललाई नियालिरहेका थिए । वेल्सले नै जेमी भार्डी र रियाद महरेजको प्रतिभालाई चिनेर उनीहरूलाई खोजेर क्लबमा ल्याएका रहेछन् । मेरो पनि दिन आयो । सन् २०१५, अगस्ट ३ तारिखमा लेइस्टरले मसँग चार वर्षको सम्झौता ग¥यो । त्यसपछि यहाँ हामीले जे ग¥यौँ, त्यो इङ्लिस टोलीका लागि इतिहास बन्यो ।
राष्ट्रिय टोलीबाट त्यसयता युरोकप र विश्वकप खेल्न पाउँदा मलाई सपना साकार भएको अनुभव भएको छ । (यो सामग्री हामीले रातो पाटिबाट साभार गरेका हौ )
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ २७, २०७५ समय: ५:१९:५३